पूर्वीय दर्शनको प्रयोजन - Everest Talk
पूर्वीय दर्शनको प्रयोजन1 min read
२०७६, ८ आश्विन बुधबार १६:४०
फिलोस् र सोफिया ग्रीकेली शब्दको संयोजनबाट दर्शन शब्दको निर्माण भएको हो । ‘फिलोस्’ को अर्थ प्रेम वा अनुराग हुन्छ भने ‘सोफिया’ शब्दको अर्थ विद्या हुन्छ । दार्शनिकता मानिसको जन्मसिद्घ गुण हो । जीवन मूल्यको पहिचान, अन्वेषण र यसतिरको प्रयत्न नै दार्शनिकता हो ।
दर्शन शब्दको प्रयोग विक्रम पूर्व पाँचौँ शताब्दीका ग्रीसेली विद्वान हेरोडोटसले गरेका हुन् । पश्चिमा विद्वानले पनि ज्ञान प्राप्तिका रूपमा दर्शन शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । पश्चिमा विद्वान जगहभिथ ले जीवनप्रतिको एक दृष्किोण नै दर्शन हो भन्ने मत व्यक्त गरेका छन् । मूलतः दर्शन भन्नाले प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान, विज्ञान, वस्तु जीवन र चेतनाबारे विवेचन र विश्लेषण गरिने विद्या हो । कुनै पनि वस्तुको वास्तविकतालाई बुझ्ने काम नै दर्शन हो ।
दर्शनलाई वर्गीकरण गर्ने विविध आधार मध्ये भूगोलको आधारमा पूर्वीय र पाश्चात्य गरेर दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पूर्वीय शब्दले पूर्व दिशाको, पूर्वको, एसियाली, भारतेली वा भारतीय दर्शन भन्ने बुझाउँछ । भारत वर्षीय दर्शनलाई नै पूर्वीय दर्शन भनेको पाइन्छ । पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत साङ्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक,मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक, जैन र बौद्घ दर्शनहरू पर्दछन् । पूर्वीय दर्शन परम्परामा आस्तिक र नास्तिक, वैदिक र अवैदिक, आत्मवादी र अनात्मवादी, ईश्वरवादी र अनिश्वरवादी भनेर दर्शनलाई विभाजन गरिएको पाइन्छ ।
वेद, ईश्वर र आत्मालाई मान्ने दर्शनलाई आस्तिक, वैदिक, आत्मवादी वा ईश्वरवादी दर्शन मानिएको छ भने तिनलाई नमान्ने दर्शनलाई नास्तिक, अवैदिक, अनात्मवादी, अनिश्वरवादी दर्शन मानिन्छ । साङ्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक,मीमांसा र वेदान्त दर्शनलाई पहिलो कोटिमा राखिएको छ भने चार्वाक, जैन र बौद्घ दर्शनलाई दास्रो कोटिमा राखिएको छ । पूर्वजन्म र पुनर्जन्म मान्ने हुँदा जैन र बौद्घ दर्शनलाई आंशिक नास्तिकको कोटिमा राखिएको छ भने चार्वाकलाई पूर्ण नास्तिकको कोटिमा राखिएको छ ।
पूर्वीय दर्शनको पृष्ठभूमिका रूपमा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रन्थहरू रहेका छन् भने उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र र भगवद्गीतालाई वेदान्त दर्शनका प्रस्थानत्रय मानिन्छ ।
पूर्वीय दर्शनको उत्पतिको स्रोत वेदलाई मानिन्छ । कतिपय विद्वले वेदलाई पूर्वीय दर्शनको प्राण मानेका छन् भने कतिपय विद्वानले वेदलाई विशाल सरोवरका रूपमा पनि हेरेका छन् । संस्कृत भाषा साहित्यको सर्वप्राचीन ग्रन्थ वेद हो । वेदमा मन्त्र र ब्राह्मण गरी दुई भाग हुन्छन् । दर्शन नै वेदका विचारको अन्तिम व्याख्या हो । त्यसैले वेदभन्दा पर रहेर दर्शनको परिचय, विकास र उपादेयता सिद्घ गर्न सकिदैन ।
ब्राह्मण ग्रन्थहरू प्राय ः यज्ञका विधानमा बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । प्रत्येक वेदका आआफ्ना ब्राह्मण रहेका हुन्छन् र यिनले मन्त्र संहिताको उपदेशबाट जिज्ञासु बनेका स्रोतालाई मोक्ष प्राप्तिको निम्ति यज्ञको विधान सिकाउँछन् ।
प्रत्येक ब्राह्मणका आफ्ना आरण्यक हुन्छन् । आरण्यकलाई ब्राह्मण ग्रन्थका सहायक मानिन्छ । आरण्यकमा यज्ञको रहस्य र दार्शनिक विचारहरूको विश्लेषण र वर्णन पाइन्छ ।
पूर्वीय दर्शनका आधारभूमि ः प्रस्थानत्रय के के हुन् ः
उपनिषद् नै वैदिक दर्शनको सारभूत, सुनिश्चित सिद्घान्तको प्रतिपादन हो । वेदको अन्तिम व्याख्या उपनिषद् भएकाले उपनिषद्लाई वेदान्त पनि भनिन्छ । उपनिषद्हरू वेदको ज्ञानकाण्ड अन्र्तगत पर्दछन् । वैदिक संहिताका विचारधाराले उपनिषद्मा पुगेर पूर्णता प्राप्त गरेका छन् ।
ब्रह्मसूत्र दार्शनिक ग्रन्थ हो । ब्रह्मसूत्रले जीवात्मा र परमात्माका सम्बन्धको व्याख्या गरेर मानिसलाई मोक्ष मार्गमा प्रवृत्त गर्ने काम गर्दछ । मोक्ष नै ब्रह्मसूत्रको लक्ष्य रहेको छ ।
भगवद्गीताको महत्त्वपूर्ण उपदेश निष्काम कर्म योग हो । कर्म नै भर्म हो भन्ने भावना गीतामा पाइन्छ । वासना, कामना,आशक्ति आदि कर्मका विषालु दाँत हुन् । यिनले कर्तालाई बन्धनमा पार्दछन् तसर्थ यिनलाई फालिदिनु पर्दछ । ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, जीव, शरीर, मोक्ष, धर्म कर्म आदिका बारेमा सम्यक् विवेचना गरिएको गीतामा ईश्वरलाई परमसत्य मानिएको छ ।
दर्शन र साहित्य:
इन्द्रिक संरचना (इन्द्रिय) सँग जोडेर हेर्दा दर्शनको सम्बन्ध मानव मस्तिष्कसँग रहेको हुन्छ । विवेकरूपी क्रिडाबाट दर्शनको जन्म हुन्छ । दर्शन ज्ञानात्मक हुन्छ । मान्छे विवेकशील भएको हुनाले मान्छेसँग अनेक प्रकारका दर्शनहरू रहेका हुन्छन् । आनन्दको अनुभूति गर्ने कुरा साहित्य हो । साहित्य केन्द्र हो अरू सबै परिधीय कुरा हुन् । साहित्यका वरिपरि रहने कुरा चाहिँ दर्शन हो । सबै कुरा साहित्यमै समेटिएका हुन्छन् त्यही भएर साहित्य केन्द्र हो भने दर्शन परिधिय कुरा हो । दर्शन र साहित्य पृथक पृथक रहे तापनि एक ठाउँमा यिनीहरूको योग हुन सक्छ । दर्शन साहित्यको अन्त ः सम्बन्ध हुन्छ । पश्चिमा मुलुकमा जति दर्शनको विकास भएको छ त्यो साहित्यकै कारणले भएको मानिन्छ । दर्शनमा बौद्घिकताको र साहित्यमा भावनाको प्रभुत्व बढी रहन्छ । दर्शनले जीवनमा प्राणत्व प्रदान गर्दछ । कल्पनाबाट साहित्यको सिर्जना हुन्छ । शून्यमा कल्पना सम्भव छैन र कल्पना हुन दर्शनको आधारलाई टेक्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वीय दर्शनको प्रयोजन:
पूर्वीय दर्शनको प्रमुख लक्ष्य मानिसलाई दुःखबाट मुक्ति दिलाउनु पनि हो । मानिसले जन्मसँगै तृष्णा, भोग, ममता, राग लिएर आएको हुन्छ र त्यस्ता किसिमका राग, तृष्णा, भोगबाट मानिस मुक्त हुन सक्दैन । वर्तमानसँग मानिस असन्तुष्ट रहेको हुन्छ । भौतिक संसारले मानिसका कामनाहरू पूरा गर्न सक्दैन । मानिसले जन्मसँगै असन्तुटि पनि पोको पारेर ल्याएको हुन्छ । यही वर्तमानप्रतिको निराशालाई शमन गर्ने उद्देश्यमा दर्शनको प्ररम्भ भएको मानिन्छ । पूर्वीय दर्शनले जीवनबाट भाग्न नसिकाएर सत्यलाई जीवनमा उतार्न सिकाएको छ । दर्र्शनको अर्थ जीवनमा आइपर्ने समस्याबाट भागेर कुनै एकान्त गुफामा बसेर चिन्तन गर्नु नभएर जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूसँग सङ्घर्ष गरेर त्यसबाट छुट्कारा पाउनु हो । अज्ञानताकै कारणले मान्छे जन्म जन्मान्तरसम्म यसै संसारमा दुःख पाइरहन्छ । जन्म, मरण, पुनर्जन्मको चक्रमा मान्छे घुमिरहन्छ । यही चक्रबाट मुक्त हुनुलाई मोक्ष मानिन्छ । अज्ञानको नाश ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ । यसकारण सबै पूर्वीय दर्शनमा मोक्ष प्राप्तिका लागि ज्ञानको अनिवार्य उपस्थितिलाई आवश्यक मानिएको छ ।
नागरिकतामा कृतनको विचार
२०७७, ७ असार आईतवार ११:३१
धन्यवाद गुरुदेव ! जीवन जिउने कला सिकाइदिनुभयो
२०७७, ११ जेष्ठ आईतवार १५:००
जीवन बीमामा कोरोना प्रभाव: अवसर वा चुनौती !
२०७७, २७ बैशाख शनिबार १६:०२
स्टार्टअप बन्द त हुँदैनन्! मलाई डर लाग्न थालेको छ
२०७७, २६ बैशाख शुक्रबार ०९:०४
देशकै सर्वाेच्च शैक्षिक संस्थामा पनि हचुवाको निर्णय !
२०७७, १६ बैशाख मंगलवार १७:२९
कोरोना, समृद्धि र आर्थिक स्वतन्त्रता
२०७७, १२ बैशाख शुक्रबार ०८:३६